င ဝန် န ဒီ: March 2012
ဒီအကြောင်း မရေးဘဲ နေမလို့ ပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်မှာမွေးလာသူဆိုတော့ အချိန်တန်ရင် နေလို့ မရပါဘူး
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြောတယ် ...တရားမျှတစွာ နဲ့မှန်မှန် ကန်ကန် လုပ်မယ်...
ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်သူ ပါတီတွေ က မတရား မမျှတ ဘူးတဲ့..ကဲ ဘာ ကို ယုံရမှာလဲ ပေါ့
ထွေက ကလေး တော့ ပါလာတဲ့ သဘောပေါ့...
ဒီနေရာမှာ ကြည့် ရအောင်...
ဘယ်လိုမှန်မှန် ကန်ကန်လုပ်ထားတယ် ဆိုတာ အချက် အလက်နဲ့ပြောဖို့ လိုပါတယ်...
မဲရုံ မှူး လက်မှတ် တစ်ခု က အခရာ ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာနဲ့မှန်ကန်ပြီလား
ဘယ်မြို့ နယ် မှာ ဘယ်လိုလုပ်ထား တာ နှစ်ကြိမ်စစ်ဆန်ဆန် တန်ပြန်စစ်ဆေးမှု မရှိတာပါ..တစ်ယောက်ထဲ ကို မယုံသင့်လို့ ပါ..မတော်တဆ အမှားအတွက် လိုအပ်တာ ကို ဖျောက်ထားပြီး မှန်တယ် ပြောမရပါ..
အဲဒီမဲရုံမှူး က ဘယ်ပါတီ ကို အားသန်သလည်းနဲ့ တင် အဆင်မပြေ ဖြစ်မှာပါ..
ဘယ်အချိန် မှာ စ မဲပေး ရင် ဘယ်လို စည်းကမ်း ဘယ်နှစ်နာရီ မှာ အဖြေ ပေး ဥပမာ နံနက် ၈နာရီ စရင် နံနက် ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ် မှာ တစ်ကြိမ် အဖြေ ကြော်ငြာပေး ဝင်လာတာ အယောက် ၁၀၀ မှာ အဖြေက ၁၀၀ ကျော်နေရင် မသမာ မူ ရှိပြီ..
ချက်ချင်းပြော စနစ် ဆို မကောင်းမူလျော့ မှာပါ..
ညနေ မှာ အဖြေစုစုပေါင်း ကြော်ငြာ ပေး ရင် အဖြေ ကို လူရှေ့ မှာ ရေတွက် ပယ်မဲ ကို ပြပြီးပယ် ...
ရေဒီယိုတွေ အက်အမ် တွေ ကနေ ဘယ်မြို့ နယ် ကို ဘယ် အက်အမ် က ကြော်ငြာ အဖြေထုတ် တစ်နာရီတစ်ခါ လုပ် ထား ပြီး တာဝန်ခံဘယ်သူ ဆိုတာ တာဝန်ပေးရင် ဘယ်မြို့ နယ် က ဘယ်လို အဖြေ ကို လူတိုင်းသိ ဘယ်မှာ မသမာမှု ရှိတာ ချက်ချင်းသိပြီး မှန်ကန်တယ် ဆို ဘယ်လိုမှန်ကန်တယ် ဆိုတာ ချက်ချင်း သက်သေ ပြလို့ ရပါတယ်...
မှန်ကန်တာ ကို လုပ်လို့ ရသလောက်ကလေးပေါ့ ပိုစနစ်ကျတဲ့ စနစ်တွေတော့ ရှိပါတယ် ဒီမိုကရေဒီ အစ မှာ အဲလောက်ကလေးလုပ်ရင် ကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့ မှန်ကန် လာမှာပါ...
မမှန်ကန် ဘူးပြောသူတွေ ကရော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တာ ဘယ်နှစ်မြို့ နယ်
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူတာဝန်ယူ မှန်မမှန် ကြည့်သူရှိဖို့ လိုပါတယ်..
မဲရုံမစခင် မိနစ် ၃၀ ကြိုပြီး သိသင့်တာတွေ ယိုပေါက်ရှိတာတွေ ပြောနိူင်ရပါမယ်
မဲရုံမှာ လူပို ဘယ်နှစ်ယောက် အတိအကျ..၁၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် မှတ်တမ်း လူအဝင်ဘယ်လောက် အထွက်ဘယ်လောက်...
အဖြေဘယ်လောက် သိဖို့ ရယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာ လိုပါတယ် ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို ကို ဘယ်လိုယူ ဘယ်လို သတိထားရမှာ ကို သိဖို့ လိုပါတယ်
ဝင်သွားတာ က တစ်ရာ အဖြေ က ၁၈၀ ဆိုရင် ဘယ်သူလုပ်တာလည်း ပေါ့ မဲရုံမှူးလား ဘေးလူလား အဲဒါသိဖို့ လိုပါတယ်
လူအဝင်မှတ်တမ်း ရယ် အဖြေမှတ်တမ်းရယ် ဓာတ်ပုံ ကသက်သေ ဖြစ်သလို ဗီဒီယို ကသက်သေပါ..မဲရုံနား ကပ်မရဘူးဆို မနီးမဝေး ကနေ မှန်ဘီလူး ကင်မရာတွေနဲ့ ရိုက်လို့ ရပါတယ်..
မဲထည့်လို့ ရတာ ဘယ်နှစ်မြို့ နယ် ဘယ်နှစ်ရပ်ကွက် အဖြေ က တစ်နိူင်ငံလုံး လူဦးထက်ကျော်နေ အုံးတော့ ပါးစပ်ကနေ ဘယ်ဘယ်လိုအော်အော် သက်သေ မရှိ စနစ် မရှိ ပြောနေလည်း အပိုပါဘဲ...
အတိအကျနဲ့ ဘယ်နယ် ဘယ်နေရာ ဘယ်သူတာဝန်ခံ
ဘယ်နာရီ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်တာ သိအောင် မရရအောင် လုပ်ပါ. သေချာအောင်လုပ် ပြီးရင် ပြော...
ပြောတော့ပြောတယ် သက်သေမရှိ မှတ်တမ်းမရှိ လူမရှိလို့ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်း ပြ ပျင်းနေရင်တော့ လိမ်သူကလိမ် ခံသူကခံ အော်သူကအော် နောက်ဆုံးတော့ ဒုံရင်းကဒုံရင်းဆိုရင်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် ဝိညာဉ် များနဲ့ကခုန်တာ ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျင်းပရုံ ကလွဲ လို့ဒီမိုကရေစီကြီး မြန်ပြည်ပေါ်မှာ မြော်လွင့်နေတော့မှာပေါ့...
ဘယ်တော့ ကျလာနိုး နဲ့ စောင့် ရင်း
မှန်ကန်တယ် ...ဘီးကျိုးတယ်.. ကျောက်ပျဉ်ကွဲတယ် ပေါ့...
မှန်ကန်သော ဒီမိုကရေစီ မြန်ပြည်တွင်ပေါ်ပေါက်ရေးသည် မြန်ပြည်သားတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်..
အရက် မူးယစ်ဆေးဝါး မကောင်းမူမှ အကောင်း ရှာဖွေ...အရင်းအမြစ်ကတော့ မကောင်းမူဆောင်းပါး
ဒီအကြောင်း ရေးဖို့ စဉ်းစားနေတာတော့ ကြာပါပြီ မကောင်းမှု ကို ရေးရ မှာဆိုတော့ အကျိုး မရှိ ဆောင်းပါး တစ်ခုပါ...ဒါပေမဲ့ မကောင်းမှုမှာမွေ့ လျော်တတ်သော လူ့ ဘဝ မှာ တွေ့ နေရတော့ ရေးဖို့ လိုလာလို့ ပါ..
ဘီယာ သောက်ပြိုင်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်တာမျိုးတွေ ကြားနေရတော့ အသက်ကြီးသူတွေ အသက် ၂၀ ကျော်သူတွေသောက် တာ အကြောင်း မဟုတ်ပေမဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေ ပါ ပါတယ်ဆိုတော့ ဥပဒေ က မသတ်မှတ်ပေးသော ကိုယ့် မြန်မာ ပြည်အတွက် မကောင်းမှု ကို ဘယ်လောက် အထိလုပ်လို့ ရတာကို သိစေချင်လာပါတယ်...
အသက် ၂၀ ကျော် ဆိုရင် မြန်ပြည်သားတော်တော် များများ အတွက် လူ့ ဘဝသက်တန်း သုံးပုံတစ်ပုံ လောက် ရောက်နီးနီး ဖြစ်နေတော့ အဲလိုလူတွေ သောက်လည်း မထူးပါဘူး ၂၀ ကျော်မှာသောက် ၄၀ကျော် ရောဂါရ ၆၀ လဲကျော် ရေဝေးလည်းခေါ် ပျော်ပျော်သာသွား လောက ကြီးက မဆန်းပါဘူး..
ငယ်ရွယ်သူတွေ အတွက်တော့ ကြီးပြင်းမူ မှတ်ဥာဏ်တွေ ကို မကောင်းမှုတွေ မှာပျော်မွေ့ သွားကြမှာပါ.. မကောင်းမှု ကကောင်းမှုထက် ဆွဲဆောင်အားကောင်းတာလည်းပါတာ ကိုး
အရက် ..ဘီယာ ကို ကြည့်ရအောင်
ကောင်းတာကတော့ သောက်ရင် သောက်သလောက် မူးတာပါ အဲဒါ အတွက်တော့ သူကသစ္စာ ရှိပါတယ် လူနဲ့ တော့ နည်းနည်း ကွာပါတယ်...
ဟုတ်ပြီ ဘယ်လောက် အထိ မူးသလဲ ဘယ်လောက်ဆို ကောင်းတာ ဆိုတော့ ပုံမှန်ဆိုရင် လူတိုင်း သူ့ လစ်မစ်နဲ့ သူရှိကြပါတယ် အဲဒီ လစ်မစ် လောက်ပဲ ဆိုရင် ဇရက်မင်း စည်းဇိမ် ကို ရနိူင်ပါတယ်
စကားပြောလို့ လည်းကောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ လည်းကောင်း အခြေအနေ ပါ..
ဒါကြောင့် အလုပ်တွေ မှာ ညစာစားပွဲ ဆန်ဆန် သောက်ပွဲတွေ လုပ်ပေးနေတာပါ...
ဒါကြောင့် လူတစ်ချို့ ဟာ မသောက်ချင်လည်းသောက် သောက်ချင်လည်းသောက် ဖြစ်ကြရပါတယ်...
ဒါကြောင့် ကောင်းမှု မဟုတ်ပေမဲ့ စကားကောင်းကောင်းပြောရဖို့နူတ်သွက် အာသွက် ဖြစ်အောင် သောက်နေရသူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ..
သောက်ရင် ဆိုးတဲ့ အဖြစ်ကတော့ ရေချိန်ကကိုက် အမူးကလွန် လာရင်တော့ ဥသြ ဆွဲတတ်လာကြပါတယ်
အဲလိုဖြစ်ရင် ဒေါင်ချာစိုင်းပြီး အမူးလွန် အန်ဖတ်ဆို့နောက်ရက်တွေ သောက်ချင်စိတ်လုံးလုံး ပျောက်ပြီး အရက်နာ ကျတတ်ပါတယ်
ဘယ်လို ကုစားမလည်းဆို မနက်အစောကြီး မှာ ပြန်ဖြေတတ်သူတွေ ရှိပါတယ်..
အဲလိုထက်ကောင်းတာကတော့ မရဏလမ်း အရောက်ပို့ နည်းလေး ပေးပါရစေ...
အဲလို အန်တာတွေ ဘာတာတွေ ဖြစ်လာရင်...မျက်နှာသစ် ခေါင်းကို ရေနဲ့ လန်းအောင်လုပ် နားထဲသံပရာရည် ညစ်ထည့်တာတော့ မကောင်းပါဘူး အက်ဆစ်လောင်းထည့်သလို ဖြစ်တာကိုး
အဲလိုအချိန် မှာ သတိလွတ်တတ်တာ က စက္ကန့်၃၀ တစ်မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်တတ်တာပါ ကျန်တာတွေသိနေတတ်ပါတယ် သတိထား ရင်သိမှာပါ..စက္ကန့် ၃၀ လောက် သတိလွတ်လိုက်ပြန်သိလိုက်ကို
မျက်နှာသစ် ရေနဲ့ လန်းအောင်လုပ်ပြီး ဂျင်ဖြစ်ဖြစ် သောက်စရာ အရက်ဖြစ်ဖြစ် ဘီယာဖြစ်ဖြစ် ထပ်တိုက်လိုက်ရင် ပြန်သောက်လို့ ရပါတယ် သောက်ကြည့် ရင် နောက်တစ်ရက် အရက်နာ မကျတော့ပါဘူး အသေတော့စောမှာပေါ့...
နံနက်ပိုင်းငေါင်တောင်ခဏဖြစ်ပေမဲ့ တစ်နာကျော်နှစ်နာရီလောက် ဆို အရက်ပြန်သောက်လို့ ရတဲ့စိတ် ဖြစ်လာပြီး အရက် ကို ကြိုက်တတ် သောက်တတ်သွားမှာပါ..
အရက် ကို အရှူံး မပေးဘဲ သောက်ရဲဖို့ လိုပါတယ်...
ဇရက်မင်းစည်းစိမ် ကို ခံတတ်လာပြီး မြင်းစီးကောင်းတတ်လာမှာပါ ဇိုးသမား ကောင်းဖြစ်မှာပါ...
ဘယ်လောက်သောက်သောက် မူးမလာတာရယ် မူးရင်ရောထပ်သောက် လုံးချာလည်ပြီး ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ နဲ့လောကကြီး ကို စောစော ထွက်ရမှာပါ..လောကကြီးမှာ ကြာကြာနေဖို့ စိတ်ကူး မရှိရင်ပေါ့...
အခုလူငယ်တွေ ကို အရက်သောက်တယ် မူးတယ် လက်ရဲဇက်ရဲ ရှိလာတာထက် အရက်ကို တစ်ဝသောက် နောက်သောက်စရာ မလိုလောက်အောင် လုပ်လိုက်ရင် အရက် ကို ရှောင်တတ်လာမှာပါ..
အရက်နာကျရင်တော့ တစ်လ လောက်ပဲ ကြာတတ်ပြီးနောက်ပြန်သောက်ဖို့ တာစူလာမှာပါ...
တကယ်ဆိုရင် အသက် ၂၀ မကျော်ရင်သောက်ခွင့် မရှိတာတွေ ဥပဒေ ကျပ်ကျပ် မှတ်မှတ် ရှိရင်ကောင်းမှာပါ...
လူငယ်တွေ အနာဂတ် ကောင်းဖို့စည်းတားစေချင်လို့ ပါ...အသက်ကြီးသူတွေ များများသောက်မြန်မြန်လျောတာ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး
ခွင့်ပြုမိန့် ရလို့ သောက်ပွဲကျင်းပတယ်ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်တော့ပါဘူး...လူကိုဖျက်တာထက် စာရိတ္တ ကို အရိုက်ချိုးခံနေရတာလည်းဖြစ်နိူင်ပါတယ်.
အလုပ်အတွက် သောက်တာကောင်းပေမဲ့ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ် မိသားစုအတွက် အချိန် ဆုံးရှူံး ကျရပါတယ်..
သားသမီး အတွက် စဉ်းစားချိန်လျော့နည်းသွားတာပါ...ကြာရင် မကောင်းမှုတွေ ပါဆက်လာတတ်ပါတယ်
မူးယစ်ဆေးဝါး ကို ကြည့်ရင် ဇိမ်ခံချင်လို့ သောက်ကျတာ တွေ များပါတယ်
လေထဲမှာ လွင့်မျောသလို သတိလွတ်လွတ် သွားတာ ကို ပျော်မွေ့ ကျတာပါ..တတ်ကြွတာတွေ ပိုများလာတာတွေ ပဲရှိတာပါ...
ထိုင်းမှိုင်းလးလံ ပျင်းယိ လာတတ်ပါတယ် ဖြတ်မရတာတော့ မရှိပါဘူး အဲဒီမှာပျော်မွေ့ တာကို ရုန်းမထွက်ချင်တတ်ကြတာပါ..
အဖြူဖြတ်သူငယ်ချင်း ကပြောတယ် မကြိုက်လို့ တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ စောစော မသေချင်သေးလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပိုင်းပြီး ဖြတ်တာတဲ့
သူနဲ့ အတူလူတွေ စတုတ္ထနိဗာန် မှာ ပျော်မွေ့ သွားရတာတွေ မြင်တာလည်းပါတာပေါ့ ပြန်မလာ နိူင်တော့ဘူးကိုး
အဲဒီမှာ တစ်ခုရှိတာက ဆေးခြောက် ကို အခုဂျပန် မှာ ပုံစံတူပဲလား တော်တော် ဆင်တဲ့ဟာတွေတွေ့ ရတယ် သုံးတာမတတ်တော့ ဆေးရုံရောက်တာတွေ ပါတွေ့ ရတော့
ဒီအတိုင်းသောက်ရင် ပုံစံ မမှန်ရင် ပြန်အန်တာတွေ ရှိတာပါ..ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိဖို့ လိုပါတယ် အမှန်တော့ ရေထဲဖြတ်ပြီး သောက်တာကတော့ ဘေးထွက်ဆိုကျိုး နည်းပါတယ် မကောင်းမှုမှာပျော်သူတွေ တားမရရင်တော့ သုံးရင်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နည်းသော နည်း ကို သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ
ဂျပန်မှာတွေ့ တာကတော့ တိုက်ရိုက် ရှိုက်ဖွာနည်း ကို သုံးတာ ရယ် တားမြစ်တာတွေ ရှိနေတာ ရှိတော့ တော်တော်လေး မလွယ်ကူတာတွေ့ ရတော့ ဝေးဝေးရှောင် နိူင်ကြမှာပါ...
ဆေးခြောက်မှာ ဘာကောင်း ကျိုး ရှိလည်းဆိုတော့ မြန်ပြည်မှာ ချောင်းသာ က ပင်လယ်ထဲဆင်းရသူတွေ က ရေဘဝဲ ပတ်ရင် ဆေးခြောက် ကို ငုံထားလိုက်ရင် ချက်ချင်းပြန်ပြေသွားတယ်တဲ့
ရေဘဝဲတောင် ဆေးခြောက်ကို ကြောက်တာ လူတွေလည်း ဝေးဝေးရှောင်နိူင်ကြပါစေ...
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကောင်းတာတွေ မဟုတ်ပေမဲ့ မကောင်းမှုပျော်မွေ့ သူတွေ မိမိဘယ်လိုအခြေအနေ ကို ပြန်ကြည့်ရင်း သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လို့အသက် ရှည်နိူင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:16 AM2comments:
တကယ်တော့ ရေထဲ ဆားဖျော်ဖျော် သကြားဖျော်ဖျော် လိုတာထက် ပိုထည့် ရင် ရေထဲ မပျော်ပဲ အနည်အဖြစ် ရှိတာ ကို သတိမူ မိရင် အပိုသုံးမိတဲ့ အပူချိန် တွေ အတွက် ငွေ ကုန် သက်သာ နိူင်မှာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:50 AM2comments:
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နှင့် သရက်တောသို့ ပြေးဆွဲသော ပုသိမ်သူ အမှတ် (၁၁) ရှပ်ပြေးရေယာဉ် နစ်မြုပ်မှုတွင် ယနေ့အထိ အသက်ရှင် သူ ၇၅ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်း ၆ လောင်းကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၅ ဦး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ငပုတော မြို့နယ်ရဲစခန်းက ပြောသည်။
ဒီဟာသ လေး မရေးခင် ဟိုရက် ကတောင်ဥက္ကလာ မှာ မီးလောင်တောင် ကို အခု ထွက်တဲ့ ဂျာနယ်တွေ မှာ ဖတ်ရတော့ သတင်းရေးသူက သူ့ အထင် ကိုရေးတင်တာ ကို တွေ့ ရတော့ သတင်းယူတာထက် ထင်မြင်ချက်တင်တာ ကို တွေ့ ရတော့
အမှုတွေ ဖြစ်လာနိူင်တာတွေ ကတော့ မဆန်းပါဘူး
ဒီမှာ က အဲဒီသတင်းတွေ ကို သိပေမဲ့ စည်းရှိပါတယ် ရေးသင့်သလား ဘာကိုပဲ အကျိုးပြုမှာလည်း မထူးဘူး မှတ်ဖို့ မလိုဘူး ဆိုတာတွေ ကို ရေးဖို့ မလိုတာ ကို မရေးတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထားတာပါ...
မီးလောင်တော့ မီးဖြတ်တာ ကို ဂျာနယ် သမားက မီးချို့ ယွင်းချက် လို့ ပြောထားရေးထားတာ ကို တွေ့ ရတာပါ..
တကယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုရေးရမယ် ရေးသင့်တယ် ဆိုတာ သူတွေ့ တွေ တောင် မသိသာ ဒီမှာ ရေးသူတွေ မှာ ရေးချင်သလို သာ ရေးနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကောင်းပါတော့မှာလဲ...
အယူအဆ မတူတာတွေ ကိုအတွေး မတူတာတွေ ကို လက်ခံပါတယ် သတင်းကသတင်းပါ ထင်မြင်ချက် ထပ်ပေးလို့ ရပါတယ်
သတင်းနဲ့ ထင်မြင်ချက်ဝေဖန်ချက် မတူတာ ကို သိသင့်ပါတယ်...ဂျာနယ် သမားတွေ အမှုတွေ ဘာတွေ ဖြစ်တာကို မဖြစ်စေချင်တာရယ် လွတ်လပ်ခွင့် ကို အပြည့်အဝ အသုံးချစေချင်ပါတယ်..
အခုရေးမည့် ဟာသ လေး ကတော့ တစ်ချိန်တုန်း က တကယ်အဖြစ်အပျက်လေး ကို ပြန်ရေးတာ ပါ...
...........ဒီမှာတောင် မှောင်နေတာ ကိုဗျာ........
တစ်ချိန်က ရန်ကုန်မှာ မီးတွေ က လာလိုက် ပျက်လိုက် နဲ့ 
နောက်ပိုင်းကျတော့ ဟိုဘက်လမ်း မီးလာ အလှည့်
ဒီဘက်လမ်း မီးလာ အလှည့် ဆို တာတွေ ဖြစ်လာရော
အဲလိုနဲ့ ဒီနေ့ ဆို ဟိုဘက်လမ်း မီးလာပြီးရင်
မနက်ဖြန် ညနေ ၈ နာရီလောက်ဆို မီးလာတော့ မှာဆိုပြီး မီးလာရင် လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ဖို့ ပြင်ထားကြသတဲ့
ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့ ညက ၈နာရီကျော်လည်း မီးမလာ တော့
စိတ်မရှည်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ် ကအဲဒီနယ်မြေ လျှပ်စစ်ဌာန ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောသတဲ့
သူတို့ အိမ် မီးလာရမည့် နေ့ဆိုပြီးတော့
လျှပ်စစ်ဌာန ကလည်းပြေပြေလည် လည်ပါဘဲ ဟုတ်ကဲ့ အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နေပါတယ် ဆိုပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပဲ ပြန်ပြော သတဲ့
ဒါပေမဲ့ မီးမလာသေးလို့ စိတ်တို နေတဲ့အိမ်က မရ ရအောင်လုပ်ပေးဆိုပြီး တောင်းဆိုသတဲ့
အဲဒါနဲ့မီးဌာန ကနေ ပြန်ပြောလိုက်တာကတော့ ...
.....ဒီမှာတောင် မှောင်နေတာ ကို ဗျာ... ဆိုပြီးဖုန်းချလိုက်သတဲ့...
နည်းပညာ အတိုအထွာ အက်စ်ပယ် တီဗွီ
အခုရက်ပိုင်း အသစ်ထွက်လာတာကတော့ အိုင်ပက်စ် ၃ ရယ် အမှတ်၃ မျိုးဆက်သစ် အက်စ်ပယ် တီဗွီ ပါ...စမ်းသပ်ပြီးမှ ရေးတာဆိုတော့ လိုတာတွေရှိချင်ရှိနေမှာပါ..
အက်စ်ပယ် တီဗွီတန်ဖိုးကတော့ ယန်း၈၈၀၀ ပါ ဖုန်းနဲ့ ဘဲ မှာမှာ အိမ်အရောက် ပို့ ပေးပါတယ်...ပို့ ခဆိုပြီး ထပ်ယူတာမရှိပါဘူး။
ယူကျူကြည့်ရတာရယ် HD Movies တွေကြည့်ရတာ တော်ကောင်းတာတွေ့ ရတာရယ်
အင်တာနက်ချိတ်ပြီး ကွန်ပျူတာဖွင့်စရာ မလို ကြည့်ရတာရယ် မြန်မာသတင်းတွေ ပို့ စ်ကဒ်ကနေ နားထောင်လို့ ရတာပါ..
နည်းနည်းထစ်တာ ကတော့ အက်စ်ပယ်ထုံးစံ လက်မြန်စွာ လုပ်ရင်း ဒီလေးအရမ်းကြာတာတို့ကွန်နက်ရှင်ပြတ်ရင် အစကနေ ပြန်စဖွင့်ရင် အကောင်းအတိုင်းပြန်ရတာပါ...
ကွန်ပျူတာ သုံးရတာထက်တော့ တော်တော် မြန်ပါတယ်။
RFA,VOA,BBC,NHK မြန်မာသတင်းတွေ ကို ကွန်ပျူတာဖွင့်စရာမလို တီဗွီ မှာချိတ် အင်တာနက် ပါချိတ်ထားလိုက်ရင် သူ့ ရီမုတ်လေး နဲ့ တင် နားထောင်လို့ ရတာပါ တော်တော် လေး အဆင်ပြေပါတယ်
ရေဒီယို အက်အမ်တွေ ပါ ရတော့ ကောင်းတာပါ..
ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်ရင် အက်ပယ်စ် အကောင့်ထဲ ငွေထည့်ထားရုံနဲ့ ကြည့်လို့ ရတာပါ ငှားရတာ မြန်သလားတော့ မမေးနဲ့မှားတော့ မနှိပ် လိုက်လေ နဲ့ အကောင့်ထဲ ပိုက်ဆံ ရှိလို့ ကတော့ ချက်ချင်း ကို ဖြတ်သွားတာ...မှားတော့ မနှိပ်မိစေနဲ့ ပေါ့..
အိုင်ဖုန်း ကသီချင်း ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေ ကို ဆို ကြိုးမလိုပဲ တီဗွီ မှာ ချက်ချင်းကြည့်လို့ ရလာတာပါ...ဒါကတော့ အရင် တီဗွီ ရိုးရိုးတွေ ကိုပါ ဒစ်ကျစ်တယ်တော့ ဒီဂျစ်တယ် ပေါ့ အခု ဝိုင်ဖိုင်ပါ တီဗွီ တွေ ဆို အက်ပယ်စ် တီဗွီ တော့ မလိုပဲ ယူကျူတွေ ဘာတွေ ရပေမဲ့ သတင်းနားထောင်ရတာရယ် HD Movies ငှားရတာရယ် ရေဒီယို ရတာရယ် ဂိမ်းတွေ ကစားရတာလေးတွေ တော့ ပို အဆင်ပြေ မှာပါ..
လူကြီးတွေ သတင်းနားထောင်ချင်ရင် လွယ်ကူတဲ့ စက်လို့ ထင်ပါတယ် လက်ဝါးစာလောက်ပဲ ရှိပြီး ပေါ့ပေါ့ သေးသေးလေးဆိုတော့ နေရာလည်း မယူပါဘူး
အိုင်ပက်စ် ၃ ကတော့ ကြည့်ရတာတော်တော် ကောင်းလာပါတယ် ဒါပေမဲ ဆမ်ဆောင်း ကနေ ဘောင်ပျောက် ဖုန်းထုတ်မှာဆိုတော့ အိုင်ပက်စ် ဘောင်ပျောက် အကြည်လာ မှ ပဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ ဆွဲဆောင်နိူင်မှာပါ..
4G ကို စတင်ထိတွေ့ ချင်သူတွေ အတွက်တော့ ဝယ်သင့်သော အရာတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်
တော်တော်လေး မြန်မှာပါ..4G နက်ဝပ်ကတော့ ဂျပန်မှာတော့ ၇၆ မက်စ်ကာဗိုက် စပိ ရှိတာဆိုတော့ အရမ်း ကို မြန်သွားပါပြီ
အခု 3G တွေ က ၁၄.၄မက်စ်ကာဗိုက်ပဲ ရှိတာပါ..
ဝိုင်ယာလက် အင်တာနက် ကို ၇.၂ မက်စ်ကာဗိုက်ဆိုတာနဲ့ တင်စကားကောင်းကောင်းပြောလို့ ရပါတယ်
၇၆မက်စ်ကာဗိုက်ဆိုတော့ ဗီဒီယို ခေါ်လို့ ရနိူင်ပါလိမ့် မယ် ဟိုထစ်ဒီထစ် မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့...ဟိုပိတ်ဒီပိတ် တာ ကိုပြောတာပါ နိူင်ငံတစ်ကာမှာလည်း ရှိပါတယ်...အိုင်ဖုန်း စစတုန်း ကဆိုရင် စကိုင်ပီကနေ အစဖွင့်ပေးပြီး နောက်ပိုင်းပြန်ပိတ် ပြန်ဖွင့် လုပ်ထားတာပါ..
အိုင်ဖုန်းနဲ့ မိမိအိမ် ကို ပြန်စစ်လို့ ကြည့်လို့ ရပါတယ် အခုတော့ နည်း အသစ်တွေ ရှိနေပါပြီ
အိုင်ပက်စ် ၂ တစ်နှစ်လောက်ပဲ ရှိချိန်မှာ အိုင်ပက်စ် ၃ထွက်လာတာပါ...
လာမယ့် အိုင်ပေါ့စ်တပ်မှာ အိုင်ပက်စ် ၃ ပုံစံ ပိုကောင်းလာနိူင်ပါတယ်...အိုင်ဖုန်းကတော့ နည်းအသစ်ထူးထူးခြားခြား ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာ မျှော်လင့်ရင်း..
လွန်ခဲ့ သော လေးနှစ်ငါးနှစ်လောက် က ဒေတာထရမ်စဖာ လုပ်ဖို့ ကို မိုင် ၃၀ ကနေ မိုင်၅၀ အတွင်း အတွက် မြန်မာငွေ သိန်း၃၀ လောက်ကုန်မှ ရတာပါ... အခုတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေလာပါတယ်
ဟုမ်းဆာဗာ အဲဒီနောက် အခုဆို အိုင်ကလောက် ဖုန်းကွန်တတ် မပျောက်ဖို့ ဆို ဒရော့ဘောက်က ကွန်တတ်ဘက်ကဒ် တွေနဲ့ ဆိုရင် ဒေတာတွေ ပျောက်မှာ စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
သတိပေးပါရစေ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကျောင်းပြီးတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် မှားတာတွေ ရှိနေမှာပါ...
ဟက်ကာတွေ တော့ မသိဘူး စင်ကာပူမှာတုန်း က အခန်းဖော် ဗီယက်နမ်ကတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပီအိပ်စ်ဒီတတ်နေသူကတော့ ကွန်ပျူတာ ကို မောက့်ကလေး နှစ်ချက်ကလစ်ပြီးတာနဲ့အဲဒီကွန်ပျူတာထဲ ကိုဖွင့်ထားရင် ဘယ်အချိန်မဆို သူဝင်ကြည့် လို့ ရတာပါ..အဲဒါ က ၂၀၀၄ လောက်ကပေါ့ သူကဟက်စ်ကာ အလုပ်မလုပ်ပေမဲ့ နည်းပညာတိုင်း သူတို့ တွေ အပြင် မထုတ်တာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:24 PM No comments:
တောင်ဥက္ကလာ(၄)ရပ်ကွက်သုတ(၁)လမ်းတွင်ယနေ့ ညနေ၆နာရီခွဲခန့် ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်(၁၆.၃.၂၀၁၂)
FNL - Feet from north line TD - total depth
FSL - feet from south line BH - bottom hole
FEL - feet from east line BHL - bottom hole location
FWL - feet from west line TVD - total vertical depth
FTMD - feet mesasured depth FJ - flush joint
အရက် မူးယစ်ဆေးဝါး မကောင်းမူမှ အကောင်း ရှာဖွေ...အရင...
ရေပိုင်နက် မြန်မာ နစ်နာ ရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ဂျပန် ငလျင် ၆.၈ မက္ကနီကျူ ရှိ
အခွင့်အလမ်း နောက်က အခွင့်အရေး
မြန်ပြည်သား ဆို ထာဝရ
ဆူနာမီ တစ်နှစ် ပြည့် အိမ်ပြန်လမ်းပျောက်နေ သူ
ဖုန်း ဘုံး ဘုန်း ဘုန်း
တနှစ် သက်တမ်း ရှိသော အစိုးရသစ် ဆီ မှာ ဘယ်လို ဒီမို...